जीवन जिउने कलाः पाँच हजार बर्ष पुरानो ग्रन्थमा यस्तो छ – Annapurna Daily
On Apr 30, 2021 286
काम कसरी गर्ने, भोजन कसरी गर्ने, निद्राबाट कसरी जाग्ने, कामवासनाबाट कसरी मुक्त रहने ? यही कुरा सिकाउन्छ विज्ञान भैरव तन्त्रले । विज्ञान भैरव तन्त्र पाँच हजार बर्ष पुरानो ग्रन्थ मानिन्छ । यस ग्रन्थमा भगवान शिवले माता पार्वतीको आत्म उपलब्धिको एक सय बाह्र सूत्र बताएका छन् । यो सूत्र वा विधी जीवन जिउने एक पद्धती हो, जीवन जिउने एक कला हो । एक तौर-तरिका हो । जीवन कसरी जिउने ?
तन्त्रले भन्छ, भोजन गर्ने हो भने कस्तो गर्ने ? भोजन गर्दा पूर्ण स्वाद लिएर गरौं । कुनै विचार होइन, कुनै कुराकानी होइन, आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान चपाउन र स्वाद लिनमा लगाउनुपर्छ । यदि ध्यान दिएर र पुरा चपाएर खानेकुरा खाने हो भने धेरै खाना खाइदैन । यसले गर्दा पाचन यन्त्रमा दबाव पर्दैन । पाचन यन्त्र चुस्त र बलियो भएपछि नै हामी धेरै किसिमका रोगबाट मुक्त हुने हो ।
तन्त्रले हाम्रो जीवन जसरी जिउनुपर्ने हो, त्यही किसिमले मार्गदर्शन गर्छ । तन्त्रले हामीलाई शरीरको भाषा सिकाउँछ । तन्त्रले भन्छ कि जो शरीरको अनुकुल हो, त्यो नैतिक हो । जो शरीरको प्रतिकुल हो, त्यो अनैतिक हो । तन्त्रले हामीलाई शरीरसँग जिउन सिकाउँछ । जब भोक लाग्छ, भोजन ग्रहण गरिन्छ । जब निद्रा आउँछ, सुतिन्छ, जब संगीत बज्छ नाचिन्छ । शरीरलाई यसरी स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । स्वतन्त्रताको अर्थ उच्छृंखलता भने होइन ।
तन्त्रले हामीलाई सही ढंगले जिउन सकिन्छ । श्वास लिनुछ भने कसरी लिनुपर्छ, बस्ने हो भने कसरी बस्नुपर्छ, हिँड्ने हो भने कसरी हिँड्नुपर्छ । अर्थात दैनिक जीवनको कार्यलाई सुनियोजित गर्ने तरिका सिकाउँछ । जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो प्रजननका लागि वा आफ्नो आनन्दका लागि कामवासनाबाट मुक्त रहनु । तन्त्रले सिकाउँछ कि कसरी कामवासनाबाट मुक्त रहने ?